पौडेललाई भेट्न बोहराटार पुगे देउवा, के के भए कुराकानी ? Canada Nepal
पौडेललाई भेट्न बोहराटार पुगे देउवा, के के भए कुराकानी ?
माघ ५ २०७७
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न उनकै निवास पुगेका छन् ।
उनी सोमबार अपरान्ह बोहराटारस्थित पौडेल निवास पुगेका हुन् । दुई नेताबीचको भेटवार्तामा पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
छलफलमा देउवाले पार्टीको एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा पार्टीभित्र साझा धारणा नरहेको सन्देश बाहिर गएको भन्दै एउटै मत बनाएर जानुपर्ने बताए।
छलफलको क्रममा पौडेलले नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानलाई धरापमा पारेको भन्दै कांग्रेस संविधानको रक्षाको पक्षमा उभिनुपर्ने बताए ।
माघ ५, २०७७ सोमवार २०:२७:५७ बजे : प्रकाशित
# राम चन्द्र पौडेल